Ny sambo vaovaon'ny Carnival Cruise Line hoentina antsoina hoe Panorama karnaval
Home » Lahatsoratra farany farany » Cruising » Ny sambo vaovaon'i Carnival Cruise Line ho an'ny Vista antsoina hoe Carnival Panorama
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Cruising • fampiasam-bola • Vaovao • teknolojia • Tourism • Fitaterana • Etazonia Vaovao Vaovao
Ny sambo vaovaon'i Carnival Cruise Line ho an'ny Vista antsoina hoe Carnival Panorama
Desambra 2, 2017
Carnival Panorama no fahatelo amin'ny andiany Vista-kilasy tena mahomby
Carnival Panorama dia voafidy ho anaran'ny sambo Carnival Cruise Line vaovao izay mitentina 133,500 2019 taonina izay kasaina hanomboka amin'ny fararano XNUMX.
Carnival Panorama no fahatelo amin'ny andiany Vista-class tena mahomby, izay nomena anarana rehetra hanehoana ny fifandraisana misy eo amin'ireo sambo sy ny ranomasina ary asongadin'ireo habakabaka anaty / ivelan'ny trano mahavariana izay mampisy traikefa an-dranomasina tena miavaka.
Carnival Panorama dia hanatevin-daharana ireo sambo rahavaviny - Carnival Vista, izay niditra an-tsehatra tamin'ny taona 2016, ary ny Carnival Horizon, izay nanomboka ny 2 aprily 2018. Ny sambo telo-karatra Vista miisa 3,954 XNUMX no sambo lehibe indrindra namboarina ho an'ny Carnival Cruise Line.
Tahaka ny anarany, Carnival Panorama dia hampiditra toerana manolotra traikefa anatiny sy al fresco, ao anatin'izany ny steakhouse Fahrenheit 555, Library Bar, ary Bonsai Sushi, miaraka amin'ireo toerana manintona eny an-kalamanjana toy ny manintona bisikileta mitaingina any an-danitra SkyRide, valan-javaboary aqua WaterWorks ary faritra fialamboly SportSquare.
Asongadiny ihany koa ny fizarana Havana mamiratra miaraka amin'ny staterooms misy aingam-panahy sy ny bar ary pisinina misy kiobanina manokana, Family Harbour misy efitrano malalaka kokoa, ny Family Harbour Lounge, Cloud 9 Spa sy Ocean Plaza, fisakafoanana sy fialamboly malalaka toerana misy seza anatiny sy ivelany.
"Carnival Panorama no anarana mety indrindra hanehoana ny aingam-panahin'ny sambo Vista-class izay manome toerana sy fotoana bebe kokoa hifandraisana amin'ny ranomasina," hoy i Christine Duffy, filohan'ny Carnival Cruise Line. "Carnaval Panorama dia hanolotra karazana traikefa nahafinaritra isan-karazany sy an-kalamanjana isan-karazany miaraka amina endri-javatra mahafinaritra iray izay hanomezana fahatsiarovana mahafinaritra mandritra ny androm-piainan'ny vahiny," hoy izy nanampy.
Eo an-dalam-panamboarana ao amin'ny sambo Marghera any Fincantieri any Italia ankehitriny, dia kasaina hiditra amin'ny serivisy amin'ny volana novambra 2019 ny Carnival Panorama. Homeport sy làlan-kaleha miaraka amin'ireo endrika vaovao hafa amin'ity sambo ity no holazaina amin'ny fotoana manaraka.